Search ရဲမိန်းမ hd - BajarFB.com
Search Results - ရဲမိန်းမ hd
ရဲမိန်းမ ဖေါက်ပြန်တာ ဖမ်းမိသောအခါ
ရဲမိန်းမ ဖေါက်ပြန်တာ ဖမ်းမိသောအခါ တိတ် တခို 1 Mar · 248 views
ပြောရရင်ဗျာ ဒီနှစ်ယောက်မှာဘယ်သူမှာလဲပြောရင် ရဲရန်(ဓာMichealသား)ရဲ့မိန်းမ မှားတယ်ဘဲပြောမှာ ဟုတ်တာပေါ့သူမှားတာပေါ့ အချို့အယူနှစ်ခုပြောပြမယ် ပထမတစ်ခုက ဒီလိုမကောင်းမှု့အတွက်တရာဥပဒေရဲ့အပြစ်ကိုခံရဲရမယ် အသေမခံဘဲနဲ့ ပြီးတော့သူမှာရင်သွေးလေးလဲရှိတယ်လေး အဲ့လိုတွေးပြီးအဖမ်းခံလိုက်လေး ဒါမှမဟုတ်လဲသူသူငယ်ချင်းရဲမကိုလဲသွားခေါ်မနေဘဲထွက်ပြေးပါလား အဓိက ကသူမှားတာဘဲ သူငယ်ချင်းဆိုတာကိုယုံးစားကြလို့ပေါ့ ပြီးတော့ပျော့ညံတာကသူရင်သွင်းနဲ့သူအသက်ကိုငဲ့ပြီးရဲမေအတွက်အသက်ပေးတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်တန်တောင်မတန်ဘူး နောက်လာမယ်ရင်သွင်းကသူ့အတွက်ရောရဲရန်အတွက်ရောတန်ဖိုးရှိမှာ ဒုတိယတစ်ခုပြောပြမယ် သူ့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာထက် ဒါမိန်းကလေးအချင်းချင်းမို့ပါ ယောက်ျာလေးဆိုအဲ့အချိန်ရဲမေ အသက်တောင်ရှိတော့မှာမဟုတိဘူး မိန်းကလေးတွေကမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှစိတ်ထားစောက်ရမ်းနူညံတာမကောင်းဘူး လောကကြီးမှာကိုယ်အသက်လောက်ဘယ်ဟာမှအရေးမကြီးဘူး သေသွားရင်ဘာမှပြန်လုပ်လို့မရဘူး So ပြောမယ် သူနေရာမှာကျွန်တော်သာဆိုရင် ခေါင်းကိုသေနတ်ချိန်ထားကထဲကအဲ့ရဲမေကိုအပိုတွေမပြောဘဲပစ်သတ်လိုက်ပြီ မသနားဘူး အတိတ်ဟောင်တွေလဲခေါင်းထဲမစဉ်းစားဘူး နောက်တစ်ခုအဲ့ရဲမေနေရာမှာကျွန်တော်အရမ်းချစ်တဲ့ကောင်မလေးဖြစ်နေရင်တောင်သတ်လိုက်မှာ မသတ်ရင်တောင်နာကျဉ်မှုတစ်ခုထိရိုက်နက်ပြီးရဲတွေလက်ထဲကတေထွက်ပြေးသွားမှာ ဒါမှဒုစရိုက်သမားတစ်ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့သွေးရှိမှာ အခုဟာကအသက်ပါပေးသွားတယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ကယ်မကောင်းဘူး နောက်တစ်ခုအကြုံပေးချင်တာက ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ချေစဉ်းစားပြီးမှရိုက်ပါ ဒီကားဆိုရင်ကျန်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကိုယ်ကိုပြန်သတ်မယ့်သူငယ်ချင်းကိုအသက်ပေးတာ ချီး မဖြစ်သင့်ဘူး ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါ ကျွန်တော်နဲ့အမြင်တူတဲ့သူရှိသလိုမတူတဲ့သူလဲရှိနိုင်တယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီPage Leader Adminအနေနဲ့ရင်ထဲခံစာမိတာပြောတာ စကားလက်ဆောင်လေးတွေနဲ့cmtမှာmentပေးလို့ရပါတယ် #𝔾𝙻𝕠𝕥 Grand Gangster Gaming 29 Sep 2020 · 4.8K views
ရဲမိန်းမ ဖေါက်ပြန်သော်လည်းဘဲ 🤪🤪 .
ရဲမိန်းမ ဖေါက်ပြန်သော်လည်းဘဲ 🤪🤪 . Johny Thet 27 Sep · 30 views
CDM မအောင်မြင်နိုင်ကြောင်း၊ လှည်းတန်း ဆန္ဒပြတဲ့နေ့က မကောင်းတတ်လို့ CDM လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပြောထားတဲ့ ယုန်ကောင်ရဲ့ အသံဖိုင်က နေပြည်တော် ရဲမိန်းမ HD ဖိုင်ထက် ပိုပွဲဆူလိမ့်မယ်။ ယုန်ကောင် အဲ့နေ့ကလည်း ပွဲမှာ သူများနဲ့မတူ လက်၂ချောင်း ထောင်ပြ​ပြီး အရူးကွက်နင်းသွားသေး။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးကို တကယ်ရင်ထဲကမပါတဲ့ ယုန်လေးလိုကောင်မျိုးတွေကို အနုပညာ အသိုင်းအဝန်းကလည်း သပိတ်ထဲ ဆွဲခေါ်မလာသင့်ဘူး။ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးကြရမှာ။ သောက်ကျက်သရေမရှိ ရှေ့တမျိူး ကွယ်ရာတမျိုး ယောကျာ်း ဖာသည်တွေကို နောက်ခေါ်မလာနဲ့။ အရေးတော်ပုံ သနတယ်။ #BollywoodUpdateNewsMyanmar
CDM မအောင်မြင်နိုင်ကြောင်း၊ လှည်းတန်း ဆန္ဒပြတဲ့နေ့က မကောင်းတတ်လို့ CDM လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပြောထားတဲ့ ယုန်ကောင်ရဲ့ အသံဖိုင်က နေပြည်တော် ရဲမိန်းမ HD ဖိုင်ထက် ပိုပွဲဆူလိမ့်မယ်။ ယုန်ကောင် အဲ့နေ့ကလည်း ပွဲမှာ သူများနဲ့မတူ လက်၂ချောင်း ထောင်ပြ​ပြီး အရူးကွက်နင်းသွားသေး။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးကို တကယ်ရင်ထဲကမပါတဲ့ ယုန်လေးလိုကောင်မျိုးတွေကို အနုပညာ အသိုင်းအဝန်းကလည်း သပိတ်ထဲ ဆွဲခေါ်မလာသင့်ဘူး။ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးကြရမှာ။ သောက်ကျက်သရေမရှိ ရှေ့တမျိူး ကွယ်ရာတမျိုး ယောကျာ်း ဖာသည်တွေကို နောက်ခေါ်မလာနဲ့။ အရေးတော်ပုံ သနတယ်။ #BollywoodUpdateNewsMyanmar MP4 YoU Tube 12 Feb · 3.1K views
Kaari Kaari (HD Full Video Song) | Hum Tum Shabana | Minisha Lanbha Hot Dance T-Series 11 Sep 2019 · 5.5M views
GTA V RP - IT'S HELL WEEK B*TCH! ️‍🔥 | VaderRP
HEELLL WEEEEEK! ▼ OPEN ME ▼ 🎮 Follow Vader 🎮 ► LIVE - https://www.facebook.com/VaderLive​ ► TWITTER - https://twitter.com/VaderRP​ ► INSTAGRAM - http://instagram.com/VaderRP​ ► DISCORD - https://discord.gg/UbvHFcw​ ► REDDIT - https://www.reddit.com/r/VaderRP​ 🎵 Music 🎵 Outro: Grunty's Furnace Fun - Banjo-Kazooie Kevin MacLeod _ FluffingaDuck Kevin MacLeod! Look Busy Monkeys Spinning Monkeys (Kevin MacLeod) - Gaming Background Music (HD) 💼 Business Inquiries 💼 ► [email protected] ✫ Video Production by Higher Vision : ➥ https://twitter.com/HigherVision1​​ ➤ Edited by Vondrel : https://twitter.com/Vondrel1 ➤ Thumbnail by Todness : https://twitter.com/Todness1​ #GTA5Roleplay​ #GTA5RP​ #GTARPHighlights Vader 22 Aug · 4.9K views